ဖုန်းကင်မရာသုံးပြီး Emoji တွေ ရှာလို့ရနေပြီနော် – AsiaApps
ဖုန်းထဲမှာတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ Emoji တွေက အပြင်မှာရှိတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို အခြေခံပြီး ဖန်တီးထားတယ်ဆိုတာ သတိထားမိရဲ့လား???
အဲ့ဒီအချက်ကို Google ရဲ့ နောက်ဆုံး AI-experiment ဖြစ်တဲ့ Emoji Scavenger က သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။
Emoji Scavenger ဆိုတာ ဖုန်းကင်မရာနဲ့အင်တာနက်ကို အသုံးပြုပြီးကစားရတဲ့ brower-based game တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်မှာရှိတဲ့ တကယ့်အရာဝတ္ထုကို ဖုန်းထဲက emoji ထဲကနေ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ရှာဖွေပေးတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ အစီအစဉ်တစ်ခုပါ။ ကင်မရာကို သုံးပြီး ရှာထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ဖုန်းထဲမှာ သိမ်းဆည်းပေးထားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့တာကြောင့် ဓာတ်ပုံတွေ ပွစိတတ်နေမှာ စိတ်မပူပဲ ပစ္စည်းတွေကို ကြိုက်သလောက် ရှာကြည့်လို့ရပါတယ်။
အခုစမ်းသပ်ချက်က လူတိုင်းလူတိုင်း နေ့စဉ်ဘဝမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ အရာဝတ္ထု ပစ္စည်းတွေကို ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ AI feature က ဘယ်လောက်ထိ မှတ်မိပေးနိုင်လဲဆိုတာကို ကောင်းမွန်စွာ ဖော်ပြနိုင်တဲ့ စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဖုန်းရဲ့ AI feature ကရော ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လောက်ထိ မှတ်မိနိုင်တယ်လို့ ထင်ပါသလဲ??? သိချင်ရင်တော့ Chrome, Safari အစရှိတဲ့ browser တစ်ခုခုမှာ emojiscavengerhunt.withgoogle.com လို့ရိုက်ထည့်ပြီး စမ်းသပ်လို့ရတယ်နော်…
နောက်ဆုံးပေါ် web နည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့ စမ်းသပ်ချက် ဖြစ်တဲ့အတွက် version မြင့်ဖုန်းတွေနဲ့ နောက်ဆုံး version လုပ်ထားတဲ့ browser တွေမှာပဲ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။။ အကယ်၍ သင့်ရဲ့ ဖုန်းမှာ အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ browser ကိုversion မြှင့်ပေးဖို့ လိုအပ်နေပြီနော်… Android ရဲ့ Chrome၊ iOS ရဲ့ Safari မှာ အသုံးပြုလို့ရနေပါပြီ။
ကဲ… Google ရဲ့ Emoji Scavenger Hunt အကြောင်းကို နည်းနည်းတော့ စိတ်ဝင်စားသွားပြီမဟုတ်လား… ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ကြည့်ရင် ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ အရမ်းလည်း ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် Chrome (သို့) Safari တစ်ခုခုမှာ
emojiscavengerhunt.withgoogle.com လို့ရိုက်ထည့်ပြီး စမ်းကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်…
Android, Google Chrome, iOS, Safari
Alexa app သုံးပြီး Android ဖုန်းတွေ ကိုအသံနဲ့ ခိုင်းစေလို့ရနေပြီဆိုတာ သိပြီးပြီလား